थोत्रो बाइक दुर्घटना भए को जिम्मेवार ? सिताराम हाछेथु, पूर्व ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक – Online Bichar
थोत्रो बाइक दुर्घटना भए को जिम्मेवार ? सिताराम हाछेथु, पूर्व ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक
Online Bichar 16th January, 2019, Wednesday 12:22 PM
२, माघ । केही महिनाअघि म ललितपुरमा कार्यरत हुँदा एक जना १८ वर्षीया किशोरी उजुरी लिएर आइन् । उनी बौद्धबाट मोटरसाइकल चढेकी रहेछिन्, टुटल कम्पनीको एप प्रयोग गरेर । सःशुल्क लिफ्ट दिने बाइकवाला केटा रहेछन् ।
एकान्तकुनाको महादेवस्थान छेउमा पुगेपछि त्यो बाइकवाललाले उनको हातमा समातेछ र ‘आई लभ यू’ भनेछ । त्यसअघि पाखुराले संवेदनशील अंगमा छुन खोजेको रहेछ । सुरुमा झुक्किएर होला भन्ने ठानिछन् । तर, फेरि त्यही क्रम दोहोरिएपछि प्रतिकार गरिछन् । त्यसपछि हात समातेर प्रेम प्रस्ताव राखेछ ।
उजुरी आउनासाथ टुटलको कार्यालयमा त्यो बाइकवालाको विस्तृत विवरण लिन गएँ । लाइसेन्स र नागरिकताको फोटोकपी लिएर त्यो बाइकलाई त्यहाँ राखिएको रहेछ । चित्त बुझेन, मोबाइल नम्बर मागेँ तर, दिनै मानेनन् । मैले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएँ । अनि बल्ल मोबाइल नम्बर दिए ।
‘कानुनअनुसार दर्ता नभएसम्म टुटल र पठाओलाई रोक्न भनेका छौं’
बहसमा सःशुल्क लिफ्ट सेवा स् प्रविधिको प्रयोग रोक्ने कि कानून सुधार्ने ?
त्यो केटालाई तुरुन्तै कार्यालय बोलाएँ । १७ लटको बाइक रहेछ । थोत्रो न थोत्रो थियो । त्यही बाइक लिएर यात्रु ओसार्ने काम गर्दोरहेछ । कुन दिन कसलाई कहाँ लगेर दुर्घटनामा पार्ला जस्तो लाग्यो ।
मेरोअघि पार्नासाथ केटोले गल्ती स्वीकार्‍यो । ‘केटी एकदमै राम्री लागेकाले आवेशमा आएर त्यस्तो गरेँ,’ भन्यो ।
खुट्टा समात्ला झैं गर्‍यो, रोयो, करायो । मैले त जसरी पनि थुन्छु(थुन्छु भनेँ । पीडित युवतीलाई लिखित उजुरी दर्ता गर्न भनेँ । तर, उनले आफ्नै बेइज्जत हुन्छ भनेर मानिनन् । केटाले निकै पटक माफी माग्यो । केटीले आइन्दा त्यसो नगर्न भनेर हिँडिन् । केटालाई सम्झाएँ, गल्ती स्वीकारेर गयो ।
हुन त यो एउटा घटना हो तर त्यसैबेलादेखि मलाई यो टुटल एपमाथि त्यति विश्वास लागेको छैन । अपरिचित मान्छेसँग एउटै बाइक सेयर गर्ने कुरा आफैंमा अप्ठ्यारो हुन्छ । अझ केटी मान्छेका लागि झन् असहज हुन्छ । यसरी यात्रा गर्नुलाई सहज रुपमै लिनेले यस्ता एप प्रयोग गरिरहेका होलान् । तर, सबै एकै खालमा मान्छे त यो शहरमा छैनन् नि !
यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका मान्छेले जहाँ जति बेला जे पनि गरिरिदन सक्छन् । यौन दुर्व्यवहार मात्रै हैन, लुटपाट र हत्यासम्म हुन सक्छ । अपराध हुन नदिने वातावरण बनाउने जिम्मा प्रहरीको हुन्छ । यस्तो कुराले प्रहरीलाई चुनौती थपेको छ ।
सम्बन्धित कम्पनीले पनि यस्ता कुरामा आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगबाट निभाएको मैले देखिनँ । एउटा लाइसेन्सका भरमा यात्रु जिम्मा लगाउन हुँदैन । उसको पुरा डिटेल कम्पनीसँग हुनुपर्ने हो । बाइकको अवस्था हेर्नुपर्‍यो । उसको लवाईखवाई र आचरणलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
अपराध भइहाले प्रहरीले माग्नासाथै त्यस्ता व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ आनाकानी हुनेरहेछ । बाइकमा चढेका यात्रु दुर्व्यवहारमा परेपछि उसको दायित्व पनि त हुन्छ कि दोषीलाई छिटो समातौं, समात्न सहयोग गरौं ।
अहिले बाइकमा यात्रु ओसार्ने बिजनेस नै भएको छ । विजनेस गर्ने सोच भएपछि बाइकको स्पीड कति बढ्ला ? त्यस्तो बेलामा दुर्घटना भयो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?
यसै पनि काठमाडौंमा बाइक दुर्घटना बढेको बढ्यै छ, त्यसमाथि बाइकमा यात्रु बोक्न पाइने विजनेसले त्यसमा चुनौती नै थप्छ । बिजनेस गर्न भनेपछि मान्छेले थोत्रो बाइक प्रयोग गर्दोरहेछ । पैसा कमाउनु न हो, अरुको जिन्दगीको कसलाई के मतलब ?
ब्रेक राम्रो नलाग्ने बाइकमा यात्रुलाई चढाउँदा दुर्घटना भयो भने हामीले सामान्य मान्न त भएन । दुर्घटनामा घाइते भएपछि उपचार कसले कति गर्ने, ठूलो खर्च लाग्दा कसले व्यहोर्ने ? यी सवाल महत्वपूर्ण छन् ।
कमिसन आउँछ भन्दैमा जथाभावी बाइकलाई कम्पनीमा राख्नु गलत हुन्छ । अब यात्रु ओसार्ने बाइकवालाले मापसे गरेको रहेछ भने के हुन्छ ?
यस्तोमा प्रयोग भएका बाइकहरु सबै वैधानिक छन् कि छैनन्, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यहाँ दुई नम्बरीका बाइक पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेको भनेर मात्रै त भएन, मानवीय सुरक्षाको विषयलाई पनि त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो ।
त्यसमाथि हामी काठमाडौंमा मास ट्रान्सपोर्टेसन आवश्यक छ भनिरहेका छौं । अब बाइकमा यात्रु ओसार्ने बिजनेस बढ्यो भने काठमाडौं अझै कति अस्तव्यस्त होला, कल्पना गरौं ।
यस्तो विजनेस चलाउने नै हो भने कम्तीमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरौं । बाइकवालालाई जिम्मेवार बनाऔं, कम्पनीहरु पनि जिम्मेवार बनुन् । हैन भने यसले समस्या ल्याउन सक्छ ।
खाली विदशेमा यस्तो छ, नेपालमा किन नहुने भनेर मात्रै हुँदैन । हाम्रो देशमा विदेशमा जस्तै सडक छ र ? हामी विदेशी जस्तै सभ्य तरिकाले नियमभित्र बसेर सवारी चलाउँछौं र ? यस्ता कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका सवारीसाधन अरुको जिन्दगीसँग पनि जोडिएका छन्, अरुको सुरक्षा र कसैको खुसीसँग पनि गाँसिएका छन्, त्यसैले सबै पक्ष हेरेर निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
युवाहरुले गरेका कामलाई सह्राना गरौं, तर नियमभित्र सबै बस्नुपर्छ । सरकारले पनि यस्ता व्यवसायलाई व्यवस्थित मात्रै हैन, सहज हुने गरी नियम बनाइदिनुपर्छ । तर, विकृति भयो भने आँखा चिम्लेर बस्नुहुँदैन ।